» बागमती प्रदेशको नेतृत्वमा इन्द्र बानियाँको संभावना कति ?
बागमती प्रदेशको नेतृत्वमा इन्द्र बानियाँको संभावना कति ?
२०७८ श्रावण ४,सोमबार १९:२३
मकवानपुर । केन्द्रीय तहमा फेरिएको राजनीतिक समिकरण र नेकपा एमालेभित्रको अन्तरविरोधका कारण बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल संकटमा परेका छन् ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आइतबार प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिएसंगै मुख्यमन्त्री पौडेल नेतृत्वको बागमती सरकारको आयु पनि धरापमा परेको हो ।
एमालेकै सांसदहरुले देउवालाई विश्वासको मत दिएपछि पार्टी अध्यक्ष केपी ओली र माधव नेपालबीच दुरी झनै बढेको छ ।
केही दिन अघि एमाले एकता जोगाउन दुबै पक्षबीच एक किसिमको सहमति भएको प्रदेशसभाका सांसद राजेन्द्र पाण्डे बताउँछन् । जुन सहमति अनुसार अघि बढ्दा बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री पौडेलको पद संकटमा पर्ने देखिएको छ ।
एमाले एकता कायम रहेमा पनि बागमती प्रदेश माधव पक्षले पाउने सांसद् पाण्डे दावी गर्छन् ।
नेकपा एमाले (ओली पक्ष) बागमती प्रदेशका प्रमुख सचेतक दिपक निरौलाले पनि पार्टी एकता जोगाउने विषयमा छलफल भएको र मुख्यमन्त्री पौडेलले योगदान गर्नुपर्ने अवस्था आउनसक्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
बागमतीमा माधव पक्षलाई नेतृत्व नसुम्पिए एकता धरापमा पर्ने एमाले नेताहरु बताउँछन् ।
यदी एमाले एकता कायम नरहेमा अर्थात माधव पक्ष सरकारमा गएमा मुख्यमन्त्री पौडेल झनै संकटमा पर्ने देखिन्छ ।
कांग्रेसले यसअघि गण्डकी प्रदेशमा कृष्णचन्द नेपालीको नेतृत्वमा सरकार विस्तार गरिसकेको छ । स्रोतका अनुसार बागमती प्रदेशमा पनि कांग्रेसले माओवादी, जसपा र अन्य दलसंग सहकार्य गर्दै सरकार विस्तार गर्ने कसरत गरिरहेको छ ।
कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व पाउँदा आफुहरु जिम्मेवारी सम्हाल्न तयार रहेको कांग्रेस बागमती प्रदेशका सचेतक छिरिङ दोर्जे लामा बताउँछन् ।
संसदीय दलको नेता नै सरकारको नेतृत्वमा जाने दलको विधान रहेकोले यदी बागमतीमा कांग्रेसले नेतृत्व पाए इन्द्रबहादुर बानियाँ मुख्यमन्त्री बन्ने सचेतक लामा बताउँछन् ।
यदी कांग्रेसबाहेक अन्य दलको नेतृत्वमा जाँदा पनि आफुहरु सरकारमा जान तयार रहेको उनको भनाई छ ।
‘नेतृत्व हामीले पाउने संभावना छ । नेपाली कांग्रेसले नेतृत्व पाउँदा इन्द्र बानियाँज्यू बाहेक अरु मुख्यमन्त्री बन्ने संभावना रहँदैन । अब माओवादी, एमालेकै माधव पक्षले नेतृत्व पाउँदा पनि हामी सघाउछौँ । उनले भने ।
आफुहरु केन्द्रीय निर्देशनको पर्खाइमा रहेको र निर्देशन प्राप्त हुनासाथ मुख्यमन्त्री पौडेलविरुद्ध अविस्वासको प्रस्ताव दर्ता गरिने सचेतक लामाले बताए ।
प्रधानमन्त्री देउवाले विश्वासको मत पाएसंगै केन्द्रीय सरकार डेढ बर्षको लागि सुरक्षित भएको छ ।
प्रदेश नम्वर १, बागमती प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशमा नेकपा एमालेको केपी ओली पक्षको सरकार भएकोले यी ३ वटा सरकार परिवर्तनका लागि कसरत भइरहेको छ ।
बागमती प्रदेशसभामा सत्तारुढ दल नेकपा एमालेको ५६, जसमध्ये माधव नेपाल पक्षको २२ र केपी पक्षको ३४ मत रहेको छ । त्यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रको २३, कांग्रेसको २२ र अन्य विपक्षी दलहरुको ८ मत रहेको छ ।
निवर्तमान मुख्यमन्त्री पौडेलद्वारा हेटौंडामा सम्पर्क कार्यालय उद्घाटन
कांग्रेस मकवानपुरको १०२ वडाबाट १८३४ क्षेत्रीय प्रतिनिधि निर्वाचित
कांग्रेस मकवानपुरगढीको सभापतिमा मेरो उम्मेदवारी रहन्छ – दाहाल